Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga neSpellcasting kunye nezithethe zomlingo
Abantu bahlala bezibuza malunga nendlela esenza ngayo ukupela kwethu kunye nezithethe zemilingo kwaye basithumelele ii-imeyile malunga noku. Ke ngoku sizothatha eyona mibuzo iphindaphindiweyo kwaye siyiphendule apha. Jonga oku amaxesha ngamaxesha ukuze ubone iimpendulo zamva nje okanye uthumele ezakho kwicandelo lezimvo.
Yeyiphi impahla oyisebenzisayo kwi-amulets?
Onke amakhubalo ethu enziwe ngentsimbi engenanto okanye iSterling Silver. Esi sinyithi yeyona ilungileyo yokubopha amandla kuyo. Amanye amakhubalo anikezelwa kuphela isilivela ecocisisiwe kuba lelona lilungileyo kumandla afakiwe. Zonke amakhonkco umzekelo anikezelwa kuphela ngesilivere entle.
Ngaba inguqulelo yentsimbi neyesilivere inamandla afanayo kunye nokusebenza?
Ewe bobabini bayafana. Isizathu seenguqulelo ezi-2 kukuba abanye abantu bayaliwa zizinto zentsimbi ukuze bakwazi ukukhetha isilivere. Amakhubalo esilivere anobubanzi obulinganayo (35mm) kodwa ayabhitya kancinci kwaye ke ayakhaphukhaphu.
Ngaba kufanelekile ukuba ndinxibe i-amulet ngaphakathi okanye ngaphandle kweempahla zam?
Eyona ndlela ilungileyo kukunxiba ikhubalo ekuchukumiseni ulusu lwakho. Ngale ndlela iya kunxibelelana namandla akho ngendlela efanelekileyo.
Ngaba izilwanyana (izilwanyana zasekhaya) zingazichukumisa iziphambano?
Ewe ayizukuphazamisa amandla ayo
Ngaba kufuneka ndibize i-amulet?
Zonke izikhubekiso zihlawuliswa xa zithunyelwa. Emva kwethutyana, kuxhomekeke kubunzulu bokusetyenziswa kwayo, kungafuneka ubabize kwakhona (ukutshaja akufani nokwenza kusebenze, ukwenziwa kunye nentlawulo yokuqala yenziwa sithi) Ukuhlawulisa ikhubalo ungayibeka ngaphandle ngexesha elipheleleyo inyanga ixesha elide kangangoko kunokwenzeka (ubuncinci iiyure ezi-4) okanye ungasebenzisa iphedi yokutshaja njenge iingelosi eziphambili or pad yidemon
Ngaba ndingazisebenzisa izangqa zakho okanye imisesane kunye nezinye izinto ezifanayo ezivela kwabanye abathengisi?
Asikukhuthazi oku kwamkelwa kwimeko apho uyazi ngokuqinisekileyo ukuba yenye amakhubalo okanye amakhonkco ayisebenzi. Kwimeko apho unokuzinxiba kunye ngaphandle kwengxaki. Unokuba nethamsanqa kwaye ikhubalo lethu lisebenze elinye. Oku kunokwenzeka xa zombini zingumoya ofanayo, umzekelo Ilusifa lethu likhubalo kwaye i I-sigil ikhubalo le-lucifer komnye umthengisi. Oku kuyenzeka ngamanye amaxesha kodwa asinakuqinisekisa ngale nto.
Ingaba idemon amakhubalo ayingozi?
Hayi, kuba sisebenzisa uyilo olukhuselekileyo olungavumeli amandla aphume kulawulo. Zonke iidemon zethu kunye nezinye i-amulets zikhuselekile ngokupheleleyo ukuba sizinxibe.
Ndingahlamba okanye ndibhukude ngekhubalo
Ewe unako, ayizukuphazamisa amandla ayo
Kuthatha ixesha elingakanani ukwenza amulet?
Ukwenza i-amulet entsha kungathatha iminyaka kodwa sakuba sinomdla amkade sivavanywa kwaye sifunyenwe sisebenza nangoku sisafuna malunga neentsuku ze10 ukuze sizilungiselele umthengi. Inyathelo lokuqala kukudala ngokwasemzimbeni, emva koko kufuneka silihlambulule kuwo onke amandla kwaye emva koko amulet kufuneka anikezelwe kumnini. Isiko lokunikezela lixhomekeke kuhlobo lwamandla, isicelo somnini kunye nosuku kunye nexesha elifanelekileyo lamandla okuba semandleni apheleleyo ukuze babe nako ukuhlangana kwi-amulet kunye nomnini.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba i-amulet yenze umsebenzi wayo?
Nje ukuba ufumane ikhubalo, zinike ixesha, ukuya kuthi ga kwiiveki ezimbalwa ukuze uhlengahlengise kwaye wenze isifo sokuqina ngamandla akho, ihlala ithatha malunga neentsuku ezingama-28.
Kufuneka wenze ntoni xa ndingaboni lutshintsho emva kweentsuku ezingama-28?
Oomoya banendlela yabo yokwenza izinto. Baqhubele phambili kakhulu kunathi kodwa kukho izinto ezimbalwa ezinokulibazisa inkqubo.
1) Uzama ukutyhala ukuba basebenze ngokukhawuleza. Leyo ngu-No omkhulu. Imimoya ayinakutyhalwa, iyalelwe ngeenxa zonke okanye yenziwe i-blackmailed. Bayeke benze into yabo kwaye baya kujonga.
2) Khange uthathe inyathelo. Oomoya balungiselela iimeko kodwa kuya kufuneka uthathe inyathelo. Kuba abanayo ifom yomzimba, abanakho ukunxibelelana kwizinto zomzimba. Makhe ndikunike umzekelo: Oomoya bafana nomlimi olungisa umhlaba wokutyala imifuno; Kodwa kuya kufuneka ukhathalele izityalo. Ukuba awuziqokeleli ngexesha, baya kumoshakala.
3) Awunambeko okanye awubonakalisi mbulelo kwimimoya. Bayakuyeka ukusebenzela wena kwaye akukho ndlela yakubenza batshintshe uluvo lwabo emva koko.
4) Awunangqiqo kwizikhalazo zakho koomoya.
Oomoya banokwenza okuninzi kodwa abakwazi ukwenza ukuba ubhabhe, ubone izinto, ube namandla e-20 persones, njl. Ndiqinisekile ukuba uyifumene indawo apha.
Ngaba oomoya bangandenza batyebe ndidume?
Ewe banako, ukuba ukhetha imimoya elungileyo kwaye wenze izicelo ezifanelekileyo. Ingxaki nge imali leyo yimimoya Andazi ukuba yintoni imali kuba ithetha izinto ezininzi ezahlukeneyo kubantu abaninzi. Nali inqaku elipheleleyo malunga kutheni imali ikhubaza isebenza kuphela kwizilumko
Ndingabavumela abanye abantu bachukumise amulet?
Akukho mntu unokuyichukumisa ngezandla zakhe, oku kubaluleke kakhulu kuba abanye abantu banokudluliselwa kwi-amulet yakho. Ukuba oku kuyenzeka kunokuba bubulumko ukuba neplani yokucoca / yokutshaja ngesandla. Ukuba awunayo, sazise kwaye siyakwenza ukucoca kude.
Kwimeko yeringi, konke oku kungasentla kusebenza ngaphandle eyabanye abantu uchukumisa umsesane. Le ayongxaki kwaye ayizukuchaphazela amandla angeniswe kuyo.
Ukuba kunokwenzeka umntu othile achukumise ikhubalo lakho ngezandla zabo, nceda Nxibelelana nathi ngokulungelelaniswa kwakhona.
Ndisebenza njani kwaye ndihoye ikhubalo lam?
Nali inqaku elipheleleyo ngalo mbandela:
Uyisebenzisa njani iAmulet yakho okanye iRing?
Ngaba kufuneka ndenze amadini kwimimoya?
Hayi, amadini okwenza kusebenze ayenziwa sithi. Kwaye nceda ungaze unikele ngegazi kumoya. Abayithandi kwaye bayakuyeka ukusebenzela wena. Ukuba ufuna ukunikela ngento njengomqondiso wombulelo kwisikhalazo abasibonileyo kuwe, sebenzisa iimvakalelo ezinje ngothando okanye umbulelo. Amanzi amatsha, iwayini, iilekese, izityalo, iziqhumiso, njl.
Ngaba amakhubalo ayaphazamisana nenkolo yam?
Hayi, abanakukhathalela kancinci ukuba ungumKristu, umBuddha, umPagan, umSilamsi, njl.
Ngaba kukho ukubuyela umva ekusebenziseni ikhubalo?
Hayi, onke amakhubalo ethu akhuseleke ngokupheleleyo ukuba angasetyenziswa. Ngamanye amaxesha banokutsala eminye imimoya ngenxa yamandla abawabambayo. Oku kunqabile kakhulu kodwa kunokwenzeka. Le mimoya itsalwa ngamandla e-amulet ayinakwenza bubi kodwa inokukwenza uzive ungonwabanga
Kuthatha ixesha elingakanani ukwenza ukupela?
Oku kuxhomekeke ubukhulu becala kuhlobo lwamandla anokusetyenziswa. Ezinye izipelingi zifuna kuphela imizuzu ye-30 ngelixa ezinye iipelingi zingathatha iiyure ze-2 okanye nangaphezulu.
Ithatha ixesha elingakanani ukuze Ukupela ukuza kumandla apheleleyo?
Izipelingi zifuna ixesha lazo lokuhlengahlengisa amandla, iimeko kunye neenjongo. Ukupela rhoqo kufuna imihla ye-28, umjikelo opheleleyo wenyanga oza kumandla apheleleyo. Ezinye izipelingi ezikhethekileyo, ezinobunzima zinokuthatha ukuya kumjikelo wenyanga we3.
Ngaba ndingawenza omnye umsebenzi wamandla ngelixa ndilinde ukupela kwakho ukuba kufike amandla apheleleyo?
Hayi, ukuba wenza umsebenzi wamandla ngexesha lokujikeleza kwenyanga uya kutshintsha iimeko kwaye ukupela akusayi kuphinda kusebenze. Kuphela sinokwenza umsebenzi wamandla ongezelelweyo ukuba sele ufumene ukupela kuthi. Siyayazi indlela esiyenze ngayo kwaye sinokuhlengahlengisa umsebenzi wamandla ongezelelweyo kupelo ukuze ungaphazamisi.
Andiziboni zotshintsho, kutheni le?
Amakhubalo ayazitshintsha iimeko kodwa kuya kufuneka uthathe inyathelo. Iziphumo zopelo zixhomekeke kwinto oyenzayo ngayo. Makhe ndikunike umzekelo: Umlingo ufana negadi elungisa umhlaba womthengi kwiimeko ezifanelekileyo ukuze umthengi akwazi ukutyala oko akufunayo. Ukuba umthengi akatyala nto, akunakwenzeka ukuba kuvunwe ngexesha elinikiweyo. Ezinye iziphako zinokubangela utshintsho olukhawulezileyo kumandla kwaye uya kuba namava oku kutshintshwa. Le yimeko yetyala ke akunakwenzeka ukuba ubabala bonke apha. Makhe ndikunike umzekelo: Ufuna ukupela uthando ukuphoswa ukuze ufumane uthando lobomi bakho. Ukusuka Usuku 3 uqala ukubona umntu omnye qho usuku. Lo ngumqondiso wokuba umhlaba sele ulungile. Ngoku kufuneka utyale. Ke thetha naloo mntu kwaye uyakufumanisa ukuba isipeliti sisebenzile. Kodwa ukuba awenzi nto, uyakuphulukana nethuba.
Ngaba usebenzisa uhlobo luni lomlingo?
Kuthi akukho mnyama umlingo, umlingo omhlophe, amazulu umlingo okanye idemon umlingo. Sikhetha ukubabiza bonke ngomlingo okanye amandla okanye uku-odola. Yonke into ingamandla, ukubeka iilebheli kuyo kuyakwenza kuphela ubumbano obungafunekiyo obuya kukhokelela ekubahleleni okanye kubi. Akukho nanye enjalo into elungileyo okanye embi umlingo. Amandla awanakubini. Sisebenzisa amandla asebenza kakuhle kwimeko nganye. Kwimeko apho kungenamsebenzi ukuba yeyiphi na amandla oza kuyisebenzisa, sinika oku kulandelayo: Ingelosi / iNgelosi eyingelosi enamandla, amandla edemon, Imimoya yeOlimpiki amandla okanye uReiki. La ngawona mandla aphambili esiwasebenzisayo, kodwa sikwasebenzisa amandla emimoya yendalo, amandla asezulwini kunye namandla eon. Uhlobo esiza kulusebenzisa luxhomekeke kwimeko esikuyo.
Zikhona i backlas xa undipostela ipela?
Hayi, sithatha zonke iindlela zokhuseleko kwaye senze isipeliti kwindawo ekhuselekileyo ngokupheleleyo.
Leliphi elona khubalo linamandla esinalo?
Onke amakhubalo ethu Namandla, Yonke into ixhomekeke kwinto oyifunayo. Ukuba uneendawo ezininzi ebomini bakho apho ufuna ukuphucula, ndingacebisa Iintsingiselo zeAraxas or ngqinela. Ezi zinamandla amakhulu kwaye zisebenza kuzo zonke iindawo.
Ngaba uyayila isiko?
Ngamanye amaxesha siyakwenza kodwa ngexesha lobhubhane we-covid-19 asizukukwazi ukwamkela umsebenzi wesiko.
Ndingazithengisa iimveliso zam kwindawo yakho?
Ewe Unga. Logama iimveliso zakho okanye iinkonzo zizezomoya / i-esoteric kwindalo. Uluhlu lweemveliso zakho lusimahla kwaye sibiza kuphela i-4.5% yentengiso yakho. Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nokuba ngumthengisi apha: Yiba ngumthengisi kwi-WOA
Malunga nokuhambisa kunye nokulandela umkhondo
Ihlabathi leAmulet isebenzisa iindlela ezi-2 zokuhambisa ngenqanawa:
1) Imeyile eQinisekisiweyo yeHlabathi
Imeyile yaMazwe ngaMazwe eqinisekisiweyo inokulandela umkhondo kwindawo yokuqala yokuhambisa ngenqanawa, de ipakethe ishiye ilizwe kwaye ekugqibeleni, xa iphakheji ishiya iziko lakho lokuhambisa kwilizwe liphela. Ngexesha lobhubhane we-covid-19, ixesha lokuhanjiswa linokuba naphi na phakathi kwe-1 kunye ne-6 iiveki ngenxa yabantu abaninzi abagulayo nabavalelweyo, ichaphazela nenkonzo yakho yeposi yengingqi.
Ukuhanjiswa ngenqanawa kwe-DHL kuthatha phakathi kweentsuku ezi-3 ukuya kwezi-6 (ezinye iindawo ezikude kunokuthatha iintsuku ezisi-8) Ukuhambisa ngexesha elifanelekileyo. Xa iphakheji itshintsha indlela, uya kufumana isaziso ngqo kwi-DHL. Ukuze kwenzeke oku sifuna i-imeyile kunye nenombolo yomnxeba. Ngaphandle kwabo awukwazi ukusebenzisa i-DHL.
Ziziphi iindlela zokuhlawula ozifumanayo?
Samkela: i-paypal, onke amakhadi amakhulu etyala, imali ye-crypto, ibhanki ukuya kutshintshelo lwebhanki naseSpain: bizum. Asiyamkeli iNtshona Union okanye uhlawule ngokuHanjiswa
Ukuba awuyifumenanga iphakheji yakho emva kweeveki ezi-6, nxibelelana nathi kwangoko ukuze sikwazi ukufaka ibango kwaye sikuthumele kwakhona.
Malunga nesiQinisekiso sethu
Simi ngasemva kwazo zonke iimveliso zethu. Bayasebenza. Ngamava adibeneyo angaphezu kweminyaka engama-75 yeqela lethu sinokuma emva kweli bango. Kwimeko apho ungonelisekanga, uneeveki ezi-2 zokubuyisa loo nto kwaye uza kubuyiselwa imali ngokupheleleyo.
Kwimeko apho iphakheji yakho ilahlekile, siya kukuthumela entsha.
Siliqela labasebenza ngomlingo abanamava adibeneyo angaphezu kweminyaka engama-5 kuzo zonke iindlela kunye neentlobo zemilingo kunye namasiko. Senza la makhonkco ngokusekwe kumava ethu ukunceda abantu kwihlabathi liphela ukuba baphucule ubomi babo. Inxalenye yezibonelelo zethu zinikelwe kwisisa ukugcina ibhalansi phakathi kwamandla. Oyena mntu ubonakalayo weqela lethu le-75 nguPeter, Nguye onakekela iwebhusayithi kunye nenkonzo yabathengi. Kutshanje siqeshe abanye abantu aba-5 ukumnceda kulo msebenzi. UPeter uyi-Master Sortiarius ngokwakhe ukuze akuncede kuyo yonke imibuzo yakho.
Unxibelelana njani nathi?
Ukuza kuthi ga ngoku besinencoko ka-whatsapp yokunxibelelana kodwa ngenxa yokuba umthamo omkhulu wezicelo kunye nemiyalezo kufuneka sizithumele kumasebe ahlukeneyo esinazo kwezi zicelo kunye nemibuzo